Nezvedu - Changlin Industrials Co., Ltd.
Changlin inovhara anopfuura 17000 mativi emamirimita 'ekuvaka nzvimbo uye ine mazhinji epamberi michina yekushandisa, timu yevakagadziri vane ruzivo uye vanopfuura vashandi vane zana. Tine maviri makuru ekugadzira mitsara: yekumonera mabhegi mutsara uye Heat chisimbiso mabhegi mutsara Yedu yemwedzi inokwana mabhegi ndeye mamirioni 1 mauniti, anotumirwa kuEurope, kuchamhembe kweAmerica, South America, Australia, Asia pacific, Middle East ……
Nomweya we "kuzvipira, hunyanzvi, kubatana, kushanda nesimba" uye maitiro ebasa rekuva "anoshanda, anoshanda, anotaurirana, akasarudzika", vese vashandi vanopa vatengi vekare uye vatsva zvigadzirwa zvakanaka uye sevhisi. Kubva pane yedu yakazara ruzivo pamusoro pemakore makumi maviri pane zvese zviri zviviri zvekusimbisa uye yekumonera tekinoroji, isu takapasa iyo certification ye ISO9001, iine Audit mushumo weSA8000, SEDEX, L'Oréal, LVMH, uye isu tiri kugara tichikura pamwe chete nemazhinji akawanda makuru mabrandi , senge pazasi: L'OREAL （Kusanganisira asi isina kuganhurirwa kuYSL, HR, LANCOME, VICHY, LA ROCHE-POSAY, Kiehl's)，LVMH ing Kusanganisira asi isina kuganhurirwa kuBVLGARI, Givenchy, GUERLAIN, SEPHORA, Batsirwa） 、 BURBERRY 、 ESTEE LAUDER (Kusanganisira asi kwete kuganhurirwa LA MER, Jo Malone London, CLINIQUE, Bobbi Brown, MAC) 、 SISLEY 、 L'OCCITANE 、 ILE UNILEVER, P & G, ISDIN, NUXE, LACOSTE, uye nezvimwe.
Nechinangwa chekusimudzira kwakasimba, izvozvi zvigadzirwa zvekuchengetedza zvakatipoteredza zvave zvichishandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana pano: Organic kana yakasikwa Cotton nemachira zvinozivikanwa kwese kwese, RPET Chinyorwa chiri munzira, nepo Yakagadziriswazve EVA kana Yakagadziriswa TPU ichave maitiro matsva. Zvitsva zvinomera zvemicheka fiber senge chinanazi chemucheka uye jira rebhanana zviri kugadzirwa uye kushandiswa. Changlin yakazvipira kugadzira zvigadzirwa zvekuchengetedza zvakatipoteredza, uye nekupa simba redu pachedu kudzivirirwa kwezvakatipoteredza.
Tipe dhizaini yako, tinoita kuti ive yechokwadi!
Isu tinokuvimbisa iwe kuti Changlin anove mumwe weako akavimbika uye ehunyanzvi ekutenga shamwari!
Chido chedu kukupa iwe nezvakanakisa zvigadzirwa uye basa rakanakisa, uye isu fekitori tinogamuchira noushamwari OEM / ODM.
isu takapfuura kuongororwa kweL'Oréal, LVMH, SEDEX 4 mbiru, kuva nechiratidzo cheIO9001 uye SA8000